Ma suurto gal inuu ka soo kabsado Xogta laga iMac Hard Drive?
Ceshano Xogta laga iMac Hard Drive in 3 Talaabooyinka
1 Ma suurto gal inuu ka soo kabsado Xogta laga iMac Hard Drive?
Hi oo dhan, aan kid jiido juice qaar ka mid ah aan iMac iyo xusuus qor waa la jebiyey. Anigu ma bilaabi karaan iMac hadda laakiin waxaan rabnaa in aan dib u soo ceshano qaar ka mid ah files ka, kaas oo ku saabsan ganacsiga yihiin. Waan ogahay waa in qaar ka mid ah xal ay dib u hanato xogta ka ama ka drive adag. Qof ii sheegi kartaa sida?
Waxaad tahay si nasiib badan maxaa yeelay waxa aad reading this page, oo bixisa xal fiican arrin aad u xanuun badan. Ka hadalka ku saabsan sanaanayaa xogta ka jaban ama jabay iMac, ay u badan tahay in ay gaarto goolka haddii aad Mac ama Windows computer kale ay leeyihiin oo ay doortaan barnaamijka dhaqancelin ah lagu xiray iMac drive adag aad.
Wondershare Data Recovery for Mac ama Wondershare Data Recovery for Windows waa mid ka mid ah khatar la'aan awood iyo iMac drive adag qalabka kabashada xogta ugu wanaagsan oo awood aad ku soo celin xog ka iMac drive adag, iyadoo aan loo eegayn aad iMac caafimaad ama jabay. Sidaa daraadeed, ayaad ugu celin kartaa videos, sawiro, dokumentiyo, files audio, emails iyo noocyada file dheeraad ah oo ka drive iMac adag.
Download version maxkamadda ka hoos ku qoran, ka dibna waxaad bilaabi kartaa iMac kabashada xogta drive adag.
Fiiro gaar ah: shuruudaha aasaasiga ah ee soo kabsaday xogta ka jabay iMac ah waa in drive iMac adag laga qaadi karaa oo ku xiran Mac ama Windows computer kale. Oo haddii aad rabto in aad isticmaasho computer Windows ah si ay u qabtaan soo kabashada, fadlan hubi nidaamka file ah oo aad drive iMac adag ee laga garan karaa in computer Windows.
2 ka iMac Hard Drive soo ceshano Data in 3 Talaabooyinka
Haddaba isku dayno soo kabsaday xogta ka drive adag ee jabay ama burburtay iMac la Wondershare Data Recovery for Mac. Haddii aad iMac weli ma sii shaqeyn karo, waxaad samayn kartaa dib u soo kabashada ku yaal.
Tallaabada 1 Dooro Recovery Mode inay bilow iMac Hard Drive Recovery
Ka dib markii isku xidha aad drive iMac adag la Mac kale oo soo ordaya Wondershare Data Recovery for Mac, waxaad ka arki kartaa interface ah sida image hoose. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in la akhriyo tilmaamaha ah qaabab badan oo kala duwan si taxadar leh soo kabashada oo dooro mid ka mid ah hab inuu ku soo bilowdo.
Halkan, waxaad qaadan kartaa "lumay Recovery File" sida isku day ah oo hore.
Tallaabada 2 Scan iMac Hard Drive
Markaasay aad drive iMac adag lagu baari doono barnaamijka, waxa kaliya oo aad u baahan tahay in ay doortaan magaceedii waxaa uu furmo suuqa oo guji "Scan" si ay u eegaan files recoverable.
Haddii aad drive iMac adag ayaa formatted, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho Xogta laga iMac Hard Drive
Sida ugu dhakhsaha badan iskaanka ka baxayo, suuqa kala barnaamijka qor doonaa dhammaan faylasha helay fayl. Waxaad ka eegi kartaa sida badan files noqon doonaa in aad awoodid in dib u soo ceshano la magacyadooda asalka ah.
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan files aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" dooro gal ah ku saabsan Mac iyaga badbaadiya.
> Resource > Mac > iMac Hard Drive Recovery - Sidee inuu ka soo kabsado files lumay ka Hard Drive on iMac